Umuthi, aziwa abantu abaningi okungenani kanye ebhekene imithi yasekhaya ngaphansi kwegama "Magnesia" imfundo on isicelo ubiza ehlukile kancane. Kuchazwa ngolimi lwesayensi libizwa ngokuthi "Magnesium sulfate" futhi yisisombululo 25% of the izinto ngenhla.
Ngoba lokho ithuluzi isetshenziswa kanjani ukuthatha izidakamizwa "Magnesia" futhi? Qondisa nalokho ubonisa ukuthi izinhlobo ezimbili reception - ngemithambo yegazi (umjovo ngesimo isixazululo) futhi ngomlomo (ngesimo isixazululo okulungiselelwe kusukela impuphu).
Kuye indlela magnesium sibhajwe umzimba, kungase kube nomthelela wonke umsebenzi wakhe, noma kungagcini ezithile izitho zangaphakathi.
Ukuze abaphathi temlomo, magnesia ayingeni nhlobo ezingqondweni zabo egazini, njengoba has a ukumuncwa ongatheni, ngakho kulesi simo, wesenzo kukhawulwe kuphela pheshana emathunjini. Kuleso simo, uma umuthi injected ngqo umthamo wegazi lesiguli, wesenzo spectrum ubanzi kakhulu. Ikakhulukazi, magnesia unekhono ukuhlinzeka lezo zinhlobo imiphumela emzimbeni womuntu:
ukuzinza of kwenhliziyo;
ukuphumula semithambo izindonga, imisipha, imisipha zibe;
ukuqinisa umzimba amaminerali, kuhlanganise ne-calcium,
beqinisa izindonga ulwelwesi;
platelet ukuphikiswa ukuhlala ndawonye.
Ukusebenzisa izidakamizwa "Magnesia" imfundo ikhomba Izimo ezilandelayo lapho ukusetshenziswa engathandeki solution magnesium sulfate:
ukuphazamiseka ukusebenza enkabeni zokuphefumula ebuchosheni;
umfutho ophansi wegazi;
Magnesia - sebenzisa njengoba laxative
Nge izakhiwo layo eliyingqayizivele ngokuba izidakamizwa elingenalo isinyathelo anobuthi, magnesium iminyaka eminingi esetshenziswa njengendlela laxative ngempumelelo kakhulu. Ukuze ngokunembile lo mphumela, magnesium sulfate kufanele kuthathwe njengendlela powder ziyoncibilika emanzini. Kulokhu, ngenxa ongaphakeme ukumuncwa umthamo, magnesia, ngokufaka emathunjini, kwandisa umthamo wamanzi zanqwabelana therein kanjalo ngempumelelo ukuthambisa of indle futhi kufike impumuzo evelele.
Mhlawumbe nokwethulwa kwesixazululo izidakamizwa, futhi enema, ezimweni lapho isixazululo zingene esiswini nganoma yisiphi ngezizathu zezokwelapha akuyona efiselekayo.
Isikali isixazululo lokulungiselela 20-25 c. magnesia impuphu e 1 litre amanzi nahlanza emazingeni okushisa okuvamile. Ezinganeni, lokhu umthamo kuyinto ye-oda 5 m. ngaphansi kweminyaka eyi-6 no-10 kuya ku-15 grams. abaneminyaka engu-6 kuya ku-18.
Magnesia ngesikhathi sokukhulelwa: Izinzuzo nezingozi nebubi
Cishe wonke umuntu wesifazane ukuya esibhedlela ngesikhathi sokukhulelwa, wabhekana neqiniso lokuthi yena esasibekelwe imijovo magnesium sulfate. Kungani lo nalokho magnesia isinyathelo has wokuthi umama okhulelwe? Inhloso yayo avame ngenxa yokuthi ukuthi unekhono kujwayeleke blood pressure, unekhemikhali uketshezi ngokweqile, ukuze uphumule imisipha. Mayelana nomkhosi wokuhlanganisa izinkomba ukusetshenziswa "Magnesia" ukulungiselela Umhlahlandlela uchaza uthi elandelayo kwabesifazane abakhulelwe:
nomfutho wegazi ophezulu;
preeclampsia nzima Ukudlikizela;
nezici ezithile ukuze thrombosis.
Ngaphezu kwalokho, sulfate magnesium iwumthombo omuhle magnesium ngoba umama okhulelwe kanye sombungu, okuyinto ikuvumela ukwabela reception yayo esimweni i Ukushoda okukhulu kwabantu element. Abheke ukuthi kungenzeka ethula magnesium ngemithambo yegazi , futhi uma kukhona usongo wazalwa kungakabi isikhathi.
Kodwa kuyinto engathandeki ukuthatha izidakamizwa nje ngaphambi ukuqala zomsebenzi, ngoba kungaholela yezinkinga eziningana.
Umuthi 'Dolphin': yokusetshenziswa
Elizabeth Izingxoxo: Biography, umsebenzi, ngokubambisana ne Armie Hammer
Yekuchumana mayelana nendlela ukwenza Umbukiso izithombe kwi Intuthu
Wrestling amaqiniso umlando
Izimpawu neurasthenia emazingeni ahlukahlukeneko wendlela sifo